अजय र काजोललाई कोरोनाको त्रासले छुट्याईदिएपछि ! - नेपाली खोज
अजय र काजोललाई कोरोनाको त्रासले छुट्याईदिएपछि !
एजेन्सी । बलिउड चर्चित अभिनेता अजय देवगण र पत्नि तथा नायिका काजोल कोरोना कहरका कारण अलग्गिएका छन् । यो जोडी वास्तविक जीवनमा अलग्गिएको नभई कोरोनाका कारण परिस्थितीले भिन्न भिन्न स्थानमा बसेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
संसारभर डरलाग्नेगरी बढेको कोरोना कहरकाबिच नायिका काजोल सिंगापुरमा रहेकी छोरी लिन पुगिन् र मुम्बईमा फिर्ता लिएर आइन् । फेरी कोरोना कहर घटेको भन्दै काजोलले छोरीको पढाइ नछुटोस भनेर फेरी छोरीलाई पुर्याइदिन सिंगापुर गएकी छिन् ।
छोरीलाई एक्लो महसुस नगराउन माता वा पिता मध्ये एक जना सँगै बस्ने सल्लाह अनुसार काजोल सिंगापुर नै बसेको बताइन्छ । यता अजय भने भारतमा कोरोना बढीरहेका बेला अजय लभने छोरा युगको जिम्मेवारी संहाल्नमा ब्यस्त छन् । यसरी अजय र काजोल एक–एक बच्चाको जिम्मेवारी बोकेर आ आफ्नो स्थानमा सुरक्षीत तरिकाले समय बिताइरहेका छन् ।
जयाले ड्र”गिस्ट कलाकारका कारण बलिउडमा दाग लाग्यो भनेपछि आक्रोसित भइन कंगना
चर्चित गायक गुणराजको ‘हल्ला धेरै भो’ मा कविता, भिजु, अन्जु
भारतबाट नेपाली महिलाको उद्धार
सुख्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ –मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध